Izithandani zothando kwiKhabhinethi yoMthi 1 eneLake Views - I-Airbnb
Izithandani zothando kwiKhabhinethi yoMthi 1 eneLake Views
Igumbi lakho lokulala e inqugwala sinombuki zindwendwe onguAj
Izindlu zokhuni ze-Avantara Homestays ngamagumbi afakwe kakuhle abekwe phakathi kwemithi. I-woodhouse inika indawo esondeleyo, elula, yokuphumla kubantu aba-2 abanemibono ye-panoramic ye-chibi kunye nentlambo ye-Shola.
Ukuhlala ixesha elide, i-WFH, Sebenza ukude kunye neNdawo zokuHlala zisijonga ngeentengiso
Ukutya okuphekwe ekhaya kunikwa ngoku-odolwa kwangaphambili
Iikhabhinethi zokhuni zinendalo ye-eco-inceba, izolile, kwaye ikhululekile.
Ibekwe embindini wekodai, izindlu zemithi zilitye elifihliweyo. Yintoni enokuba ngcono kunokulala ubukele echibini kwaye uvuse iintaka ezicula kufutshane nawe-konke ngaphakathi kwemida yesixeko?
I-woodhouse ineendawo - Ingqondo kunye noMzimba - Iinkcazo zeendawo ezi-2 zingezantsi.
Ingqondo-IPatio: inomgangatho wakudala owenziwe ngamaplanga kunye neereyile, yindawo entle yokufunda okanye yokuthetha kwaye inebalcony ejonge ihektare yemithi eluhlaza kunye nechibi ...
Umzimba - Igumbi lokulala: Ukulala 2.Yintoni enokuba ngcono kunebhedi enkulu kwindlwana yamaplanga? Ibhedi etyebileyo ephindwe kabini ihonjiswe ngoomatrasi obutofotofo: Imo yenkumbulo kunye nemithombo ye-ortho. Iilinen ezipholileyo zenziwe nge-300TC Linen okanye i-microfibres. Kuthetha ukuba uya kulala ubusuku bakho obuhle apha eChalet! Ligumbi eliphangaleleyo elingama-300sqft elinewodrophu, isipili sokunxiba, Ifeni, iKetile, iibhegi zeti kunye nesingxobo sekofu, itafile yekofu kunye nendawo yokuhlala, izibane ezingqongileyo kunye nedesika yokufunda. AKUKHO TV esithethelelayo nangona sine-wifi
Amagumbi okuhlambela adityaniswe nezinto zale mihla (ishawa, amanzi ashushu, ukuhlamba izandla kunye nesomisi enwele) sibonelela ngeetawuli ezingama-600 zeTC kunye neesepha ezenziwe ngesandla.
Nceda uye kwii-FAQs kwiCandelo elithi "Ezinye Izinto ekufuneka Ziqatshelwe".
Simalunga neekhilomitha ezi-1 ukusuka kwindawo yokungena echibini enkulu / ukukhwela amaphenyane / ukukhwela ibhayisekile / ukukhwela ihashe
Ngaphandle kokukubonisa xa ufika kwaye uzisa ikofu kusasa, siyakuhlonela ngokupheleleyo ubumfihlo bakho kwaye sikushiye wedwa. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba iiplanga kunye nekhaya lethu labelana kakhulu, sifumaneka ngokulula kwaye sivale ukuba kukho into oyifunayo.
Ngaphandle kokukubonisa xa ufika kwaye uzisa ikofu kusasa, siyakuhlonela ngokupheleleyo ubumfihlo bakho kwaye sikushiye wedwa. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba iiplanga kunye nekhaya…